Nkwekọrịta njem na njem nlegharị anya belatara 17.4% n'ọnwa Ọgọst 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Nkwekọrịta njem na njem nlegharị anya belatara 17.4% n'ọnwa Ọgọst 2021
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Enwere ike ịsị na ọrụ azụmahịa ahụ dara ada nwere mmetụta na-emebi emebi dị ka ejighị n'aka n'ihi ọrịa COVID-19 ka na-ada ada.
A mara ọkwa azụmahịa 57 njem na njem nlegharị anya na Ọgọst 2021.
Ọnụ ọgụgụ azụmahịa ekwuputara gosipụtara mbelata 17.4% site na July 2021.
Ọgọstụ bụ ọnwa nke abụọ sochiri anya ọdịda nke ọrụ azụmahịa.
A mara ọkwa ngụkọ nke azụmahịa 57 (nke gụnyere njikọta na nnweta [M&A], nhatanha nkeonwe, na ntinye ego) na njem njem na njem nlegharị anya nke ụwa na August 2021, nke bụ mbelata 17.4% karịa azụmahịa 69 ekwuputara na July, dị ka ndị ọkachamara ụlọ ọrụ data na ndị nyocha.
Ọgọstụ bụ akara ọnwa nke abụọ na -aga n'ihu nke mbelata ọrụ azụmahịa maka mpaghara njem na njem nlegharị anya mgbe ọ maliteghachiri na June. Enwere ike ịsị na ọrụ azụmahịa ahụ dara ada nwere mmetụta na-emebi emebi dị ka ejighị n'aka n'ihi ọrịa COVID-19 ka na-ada ada.
Ụdị nkwekọrịta niile (n'okpuru mkpuchi) hụkwara mbelata ọrụ azụmahịa na Ọgọst ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga. Nkwuputa maka itinye ego, ịha nhatanha na njikọta na ịzụ ahịa belatara 4.3%, 20% na 24.4% n'ọnwa Ọgọstụ ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga, n'otu n'otu.
Mmekọrịta ahịa belatara na ahịa ndị bụ isi dị ka USA, na UK, India na Australia n'ime Ọgọstụ ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga, ebe China hụrụ mmụba na ọrụ azụmahịa.